Soo dejisan Photo Calendar Creator 14 – Vessoft
WindowsSawireynta iyo qaabeyntaTifatiraha sawiradaPhoto Calendar Creator
Bogga rasmiga ah: Photo Calendar Creator
Sawirada Taariikhda Abuuraha – software si loo abuuro jadwalka sanadlaha ah ama bil walba leh qaabka asalka ah. Barnaamijka wuxuu abuuraa jadwalka qorsheynta, jadwalka boostada ama mashiinka derbiga, isku-xirka, buugga, jeebka iyo noocyada kalendarka. Sawirada Calendar Calendar wuxuu bixiyaa xulasho kala duwan oo ku saabsan shaxda asaasiga ah sida fasax, xayeesiin, qoys, dugsi, oo kuu oggolaanaya inaad doorato sanduuqyada kalandarka ee la doonayo ee mas’uul ka ah dhacdooyinka muhiimka ah ee nolosha aadanaha. Sawirka Taariikh sawir leh ayaa kuu ogolaanaya inaad ku darto sawir ama qoraal ah jadwalka oo aad u habayso sida aad door bidayso. Software wuxuu taageersan yahay qaabab badan oo daabacan isla markaana si toos ah ayuu u abuuri karaa qaababka daabacaadda ee jadwalka qulqulaya isagoo tixgelinaya khariidadaha iyo khadadka xoqidda. Sawirka Taariikh Jadwalka wuxuu ka kooban yahay muuqaalo badan si loo saxo dhammaan qaybaha mashruuca si loo abuuro kalandarka tayo-xirfadeedka.
Ku darista sawirada jadwalka
Mawaadiicda muuqaalka iyo muuqaalka
Daabacaadda jadwalka tayo sare leh
Soo dejisan Photo Calendar Creator
Faallo ku saabsan Photo Calendar Creator
Photo Calendar Creator Xirfadaha la xiriira